मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा : काठमाडौंबासीको खानेपानी समस्या टर्ला ? « Rara Pati
मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा : काठमाडौंबासीको खानेपानी समस्या टर्ला ?
२२ फागुन, काठमाडौं । आज सुन्दरीजलमा मेलम्चीको पानी आएसँगै काठमाडौँ उपत्यकावासीको दुई दशकको सपना पूरा भएको छ ।
तीन वटा खण्डबाट सुरुङ पखाल्ने (फल्सिङ) को व्यवस्था मिलाइएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । उनका अनुसार सुरुको खण्ड अम्बाथानबाट ग्यालथुमसम्मको खण्ड रहेको छ । करिब पाँच किलोमीटर लम्बाइको उक्त खण्ड उकालो रहेको छ । सो खण्ड भरिएपछि पानी ग्यालथुमबाट सिन्धुतिर दोस्रो खण्डमा प्रवेश गर्ने उनले जानकारी दिए । सो खण्डको लम्बाई आठ दशमलव दुई किलोमीटर छ । तेस्रो खण्डका रुपमा रहेको सिन्धुबाट सुन्दरीजलसम्मको खण्ड सबैभन्दा लामो छ । झण्डै १० किलोमीटर लम्बाईको सो खण्ड पार गरेर पानी सुन्दरीजल आइपुगेको हो । एकै पटक नभरिएपनि एउटा तहसम्म पुगेपछि अर्को खण्डमा पानी पुग्ने उनको भनाइ छ ।
सुरुङ पखाल्न पूरै भल्भ खोलेर राखिने आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङ सफा भएपछि मात्रै पानी प्रणालीमा पठाइने प्रवक्ता पन्तले बताए । सुरुङ सफा गर्दा भित्र धमिलो पानी आएपछि त्यसलाई बागमतीमा पठाइने उनले बताए । सफा पानी आएपछि सुरुङ पखालिएछ भन्ने हुन्छ । सुरुङ पखाल्ने ठाउँ अम्बाथान, ग्यालथुम, सिन्धु र सुन्दरीजलमा रहेको छ । उनले भने, ‘सुन्दरीजलमा पानी पखालिएपछि त्यही पानी बाग्मतीमा आउने हो ।’
सुरुङको गेट थुनेर परीक्षण भइरहेको छ । अहिले सानातिना समस्या भएमा तुरुन्त देखिने आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमा समस्या भए/नभएको भन्ने विस्तृत रुपमा जानकारी सुरुङ भरिएपछि नै थाहा हुने उनको भनाइ छ । सुन्दरीजलमा पानी आएर केही समयमा नै पानी प्रणालीमा जाने भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई तयारी अवस्थामा रहन भनिएको प्रवक्ता पन्तले बताए । सुरुङ पखालेर सफा भएपछि मात्रै प्रशोधन केन्द्रमा हालिने उनको भनाइ छ । सुरुङबाट पानी सफा भएर आउन अझै केही दिन लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ठूलो चुहावट नभएमा चैतसम्ममा पानी प्रणालीमा पठाउन सकिन्छ ।’
वि.सं २०५६ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि एशियाली विकास बैंकसँग सन् २००१ मा सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो पटक काम गरेको इटालियन कम्पनीले गतिका साथ काम अघि बढाए पनि आर्थिक रूपमा टाट पल्टेर कम्पनी फिर्ता भयो । केही महिनाको अन्योलपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग बाँकी निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खानेपानी मन्त्रालयले पटक–पटक काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी झारिने लक्ष्य राख्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक असार मसान्तसम्ममा पानी झार्ने लक्ष्य राखिए पनि दुर्घटनाले त्यो समय धकेलिएको थियो ।